अभिनेत्री वेनिशा हमाल हिजोआज चलचित्रमा कमै देखिन्छिन् । उनको व्यस्तता चलचित्रमा भन्दा पनि म्युजिक भिडियोमा बढी छ । वर्षातमा पनि सुटिङमा व्यस्त हुने वेनिशालाई झरीले प्रशस्तै दुःख दिएको छ । ‘झरीका कारण काममा अवरोध हुने गरेको छ । यो मौसममा कुन समयमा पानी पर्छ अनुमान गर्न सकिँदैन । पुरा पढ्नुहोस्
यतिबेला माछा, गंगटा र घोंगीका विशेष परिकार तयार पारिन्छन् । खेतमा पूजा गरेर पोलेको माछा इन्द्र देवतालाई चढाएपछि रोपाइँ सुरु हुन्छ । उक्त पूजामा सबै किसानले रक्सी र खानेकुरा लानैपर्ने नियम भएको थारु महतवा महासंघका जिल्ला अध्यक्ष तथा घोराही, जलौराका किसान चन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए । पुरा पढ्नुहोस्
कुरा धान रोप्ने वा हिलो खेल्ने मात्र होइन, रोपाइँका बेला खाईने खाना वा खाजाको पनि हो । विशेष अवसरमा विशेष परिकार खानु–ख्वाउनु नेपाली समाजको बिशेषता नै हो । यस क्रममा साप्ताहिकले यो वर्षको धान दिवसका अवसरमा मुलुकमा विभिन्न क्षेत्र तथा जातजातिमा रहेको रोपाइँका अवसरमा खाइने–ख्वाइने परम्परागत खाना–खाजाको खोजीनिती गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. हेमराज कोइराला, असार १५, २०७६
पौष्टिकताका हिसाबले दही सबै किसिमका पोषक तत्व भएको अमृत खाद्य हो । घरेलु विधिले तयार गरिएको १ सय मिलिग्राम दहीमा ८८ प्रतिशत पानी, ३ दशमलव ५ ग्राम प्रोटिन, ४ दशमलव ७ ग्राम कार्बोहाइड्रेड तथा ३ दशमलव ३ ग्राम चिल्लो पाइन्छ भने यी सबै तत्वको उपपाचन हुँदा ६१ किलो क्यालोरी उर्जा प्राप्त हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. जनकबहादुर बस्नेत, असार १५, २०७६
शुद्ध र प्रदूषित नभएको माटो छालाका विभिन्न रोगमा उपयोगी मानिन्छ । माटो चिकित्साले उच्च रक्तचाप, तनाव व्यवस्थापन, कब्जियत, पायल्स, ग्यास्ट्रलाईटिस, आँखाको दृश्य क्षमता वृद्धि, टाउको दुखाइ तथा घुँडा खिइएको समस्या आदि समाधान गर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
शान्ता अस्थानी, असार १५, २०७६
खेतमा काम गर्दा शरीरलाई पर्याप्त ऊर्जा आवश्यक हुन्छ जसका लागि खानपिनमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । रोपाइँका क्रममा दिनभरि घाममा बसी काम गर्नुपर्ने भएकाले शरीरबाट प्रशस्त पसिना निस्कन्छ । त्यसरी निस्किएको पसिनासँगै हाम्रो शरीरको पानी तथा खनिज पदार्थ पनि निस्कन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
मानो रोपेर मुरी उब्जाउने महिना असारको मध्य दिन अर्थात् असार १५ गतेलाई धान दिवससँगै रोपाइँ जात्राका रूपमा मनाइन्छ । रोपाइँको मध्यमा पर्ने असार १५ लाई दही, चिउरा, आँप आदि परिकारले अझ विशेष बनाउने भएकाले नै होला यसलाई दही चिउरा खाने दिन भनिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , असार ९, २०७६
रागको उत्पत्तिपछि रागिनीहरू पनि त्यही क्रममा उत्पत्ति भए । हरेक राग र रागिनीका आठ–आठवटा सन्तान थिए, जसलाई उपराग भनियो । अहिले प्रचलनमा रहेका ८४ थरीका रागका स्रोत शिवले सृष्टि गरेका मूल ६ वटा राग नै हुन् । शिवले यी राग सृष्टि गर्दा आफ्नो वाद्ययन्त्र डमरु प्रयोग गरेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्